ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့် ရအောင် ပြုံးတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတယ် – Shinyoon
ပြုံးနေတိုင်း ပျော်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့် ရအောင် ပြုံးတတ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတယ် နာကျင်ကျင်နဲ့လဲ လှလှပပလေး ပြုံးပြတတ်ဖို့အထိ ကျွန်မ လေ့ကျင့်ထားပါတယ် ။
ပျော်ရာမှာ မနေရ တော်ရာမှာ နေနေရတဲ့ ဘ၀မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုံးရ ပျော်ရတဲ့အချိန်တွေထက် ပျော်အောင် မနည်းနေနေရတဲ့အချိန်တွေကသာ ပိုများခဲ့တာလေ ။ ဒါကိုပဲ ဘ၀လို့ ခေါ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
စလုံးရေ စကတည်းက . . . အူဝဲနဲ့စခဲ့ရတာလည်း အမြဲတမ်း အမှတ်ရပါတယ် ။ ကိုယ်တစ်ဦးတည်းတစ်ယောက်တည်း မွေးဖွားလာခဲ့ရတာကိုလဲ အမြဲပဲ သတိတရ ရှိပါတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက် ရှိမှ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပျော်အောင် ထားမှ ပျော်အောင်နေတတ်တဲ့ အရင်ကလို ခပ်ညံ့ညံ့ကောင်မလေးတစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူး ။
အခုဆို မပျော်တဲ့အရပ်မှာ အားရပါးရ ရယ်တတ်လာတဲ့အထိ ဟန်ဆောင်တတ် မြိုသိပ်တတ်လာပါပြီ ။ ရင့်ကျက်လာတာမျိုးဆိုတာထက် ဘ၀အကြောင်းကို အရင်ကထက် ပိုပြီးသိလာတယ်လို့ပဲ ခေါင်းစဥ်တပ်ပါတယ် ။ တစ်စုံတစ်ယောက် အပေါ် မှီခိုပြီးမှ ပျော်ရတဲ့အပျော်တွေဟာ . .. ခဏတာပဲ ခံတယ် ။ သူပေးသလောက် သူဆန္ဒရှိသလောက်ပဲ အချိန်ကြာတတ်တာလေ ။ မနက်ဖြန် ဒါမှမဟုတ် ဒီနေ့လဲ အဲ့ဒီ အပျော်တွေကနေ အငိုတွေ ခဏခဏ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးပြီမဟုတ်လား
ကျွန်မ နောက်ထပ် နာကျင်မခံစားရအောင် အမှတ်အတေးလေးတော့ထားပါတယ် ။ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာ စပြီးသိကတည်းက ကျွန်မ မပျော်ပေမယ့်လဲ ရအောင် ပြုံးတယ် ။မျက်နှာပြောင်တယ်လို့ ခေါင်းစဥ် တပ်ချင်လဲ တပ်ပါ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မျက်ရည်ကျလို့လဲ လှောင်ရယ်မယ့်လူတွေချည်း ရပ်နေတဲ့အရပ်မှာ စာနာပါဆိုပြီး လိုက်ပြောပြနေတာထက်စာရင် ကျွန်မ အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီး ညာလိုက်တာက ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ် ။
လူတစ်ယောက် ပျော်ခြင်းမပျော်ခြင်းဆိုတာ သူ့နှုတ်ခမ်းက အပြုံးတွေနဲ့ မဆိုင်တဲ့အကြောင်း လူတစ်ယောက်ကို နားလည်ချင်ပါတယ်ဆိုရင် သူ့စကားတွေချည်းကို နားထောင်ရုံမဟုတ်ပဲ မျက်၀န်းက စကားလုံးတွေကို နားလည်တတ်အောင် ကြည့်တတ်တဲ့အကြောင်း တချို့လူတွေကို နားလည်သဘောပေါက်တတ်စေချင်တယ် ကျွန်မကို ကြည့်ပါ ပြုံးနေတဲ့အခါတိုင်း ရယ်နေတိုင်းအခါတိုင်း သူအဆင်ပြေနေတာပဲ ပျော်နေတာပဲလို့ ထင်ရင် မှားလိမ့်မယ် ကျွန်မ ဆိုတာက မပျော်လဲ အားရပါးရ ပြုံးတတ်တယ်လေ ။
ေပ်ာ္ရာမွာ မေနရ ေတာ္ရာမွာ ေနေနရတဲ့ ဘ၀မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၿပဳံးရ ေပ်ာ္ရတဲ့အခ်ိန္ေတြထက္ ေပ်ာ္ေအာင္ မနည္းေနေနရတဲ့အခ်ိန္ေတြကသာ ပိုမ်ားခဲ့တာေလ ။ ဒါကိုပဲ ဘ၀လို႔ ေခၚတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ ။
စလုံးေရ စကတည္းက . . . အူဝဲနဲ႔စခဲ့ရတာလည္း အၿမဲတမ္း အမွတ္ရပါတယ္ ။ ကိုယ္တစ္ဦးတည္းတစ္ေယာက္တည္း ေမြးဖြားလာခဲ့ရတာကိုလဲ အၿမဲပဲ သတိတရ ရွိပါတယ္ ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ ရွိမွ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေပ်ာ္ေအာင္ ထားမွ ေပ်ာ္ေအာင္ေနတတ္တဲ့ အရင္ကလို ခပ္ညံ့ညံ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး ။
အခုဆို မေပ်ာ္တဲ့အရပ္မွာ အားရပါးရ ရယ္တတ္လာတဲ့အထိ ဟန္ေဆာင္တတ္ ၿမိဳသိပ္တတ္လာပါၿပီ ။ ရင့္က်က္လာတာမ်ိဳးဆိုတာထက္ ဘ၀အေၾကာင္းကို အရင္ကထက္ ပိုၿပီးသိလာတယ္လို႔ပဲ ေခါင္းစဥ္တပ္ပါတယ္ ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ အေပၚ မွီခိုၿပီးမွ ေပ်ာ္ရတဲ့အေပ်ာ္ေတြဟာ . .. ခဏတာပဲ ခံတယ္ ။ သူေပးသေလာက္ သူဆႏၵရွိသေလာက္ပဲ အခ်ိန္ၾကာတတ္တာေလ ။ မနက္ျဖန္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီေန႔လဲ အဲ့ဒီ အေပ်ာ္ေတြကေန အငိုေတြ ခဏခဏ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီးၿပီမဟုတ္လား
ကြၽန္မ ေနာက္ထပ္ နာက်င္မခံစားရေအာင္ အမွတ္အေတးေလးေတာ့ထားပါတယ္ ။ကိုယ့္ရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔ဆိုင္တယ္ဆိုတာ စၿပီးသိကတည္းက ကြၽန္မ မေပ်ာ္ေပမယ့္လဲ ရေအာင္ ၿပဳံးတယ္ ။မ်က္ႏွာေျပာင္တယ္လို႔ ေခါင္းစဥ္ တပ္ခ်င္လဲ တပ္ပါ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္မ်က္ရည္က်လို႔လဲ ေလွာင္ရယ္မယ့္လူေတြခ်ည္း ရပ္ေနတဲ့အရပ္မွာ စာနာပါဆိုၿပီး လိုက္ေျပာျပေနတာထက္စာရင္ ကြၽန္မ အဆင္ေျပပါတယ္ဆိုၿပီး ညာလိုက္တာက ပိုၿပီး အဆင္ေျပပါတယ္ ။
လူတစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ျခင္းမေပ်ာ္ျခင္းဆိုတာ သူ႔ႏႈတ္ခမ္းက အၿပဳံးေတြနဲ႔ မဆိုင္တဲ့အေၾကာင္း လူတစ္ေယာက္ကို နားလည္ခ်င္ပါတယ္ဆိုရင္ သူ႔စကားေတြခ်ည္းကို နားေထာင္႐ုံမဟုတ္ပဲ မ်က္၀န္းက စကားလုံးေတြကို နားလည္တတ္ေအာင္ ၾကည့္တတ္တဲ့အေၾကာင္း တခ်ိဳ႕လူေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္တတ္ေစခ်င္တယ္ ကြၽန္မကို ၾကည့္ပါ ၿပဳံးေနတဲ့အခါတိုင္း ရယ္ေနတိုင္းအခါတိုင္း သူအဆင္ေျပေနတာပဲ ေပ်ာ္ေနတာပဲလို႔ ထင္ရင္ မွားလိမ့္မယ္ ကြၽန္မ ဆိုတာက မေပ်ာ္လဲ အားရပါးရ ၿပဳံးတတ္တယ္ေလ ။